December 2018 – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
လုံခြုံမှုရှိစွာဖြင့် ပုံမှန်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာ အဆိုမူကြမ်းအား ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုချမှတ်ခဲ့ခြင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
H.E. U Kyaw Zeya concurrently accredited as Ambassador of Myanmar to the Kingdom of Spain
H.E. U Soe Lynn Han Presents Credentials to King of the Netherlands
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ တို့၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အကြား ပြုလုပ်သည့် စတုတ္ထအကြိမ် (၂+၂) အဆင့်မြင့် ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Union Minister U Kyaw Tin attends 4th MLC Foreign Ministers’ Meeting held in Luang Prabang
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Saurabh Kumar as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of India to the Republic of the Union of Myanmar
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဗီယက်နမ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Myanmar has agreed to the proposed appointment of Ms. Akua Sekyiwa Ahenkora as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Ghana to the Republic of the Union of Myanmar
H.E. U Kyaw Moe Tun Presents Credentials to President of Swiss Confederation
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် အာရှ-ပစိဖိတ် ဒေသဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ